Shiinaha MVS Vertical Axial qulqulka iyo Isku-dhafka isku-dhafka ah ee warshadaha bamka bulaacadaha iyo soo saarayaasha | Tongke
MVS Vertical Axial socodka iyo Isku-dhafka Isku-dhafka ah ee bamka bullaacadaha
MVS taxanaha mashiinka qulqulka-qulqulka AVS ee bambooyin isku-dhafan oo isku-dhafan (Vertical Axial flow iyo Mixed flow submersible bulaacada) waa wax soo saar casri ah oo si guul leh loogu talagalay iyadoo loo adeegsanayo qaadashada tikniyoolajiyadda casriga ah ee shisheeye. Awooda matoorrada cusub ayaa 20% ka weyn kuwii hore. Waxtarka ayaa 3 ~ 5% ka sarreeya kuwii hore.
Iyadoo impellers hagaajin karo leeyahay faa'iidooyinka ah awood ballaaran / madax ballaaran / waxtar sare / codsi ballaaran iyo wixii la mid ah.
J: Saldhigga matoorku wuu yaryahay, dhismuhu waa sahlan yahay maalgashiguna aad ayuu u yaraaday, Tani waxay badbaadin kartaa 30% ~ 40% kharashka dhismaha.
B: Way fududahay in la rakibo dayactirka iyo hagaajinta bamka noocan ah.
C: Nolol dhaadheer oo dhaadheer.
Waxyaabaha taxanaha ah ee 'AVS / MVS qulqulka qulqulka' iyo 'Mixed flow submersible pump' ayaa tuuri kara bir bir ah ama bir bir ah.
AVS / MVS qulqulka qulqulka iyo bambooyin isku dhafan oo isku dhafan ayaa ku habboon suxulka rakibaadda, si fiican u rakibida cantilever iyo rakibaadda si fiican u-socodka cantilever
3. Beeb horay loo aasay
Wareejinta Heerka Biyaha
5. Guddi xakamayn
Hore: Maska Dheer Vertical Vertical Sea Water Warshadaha Mashiinka Qaritaanka Xakamaynta Daadka
Xiga: Qashinka Bullaacadaha Bullaacadda Bamka Biyaha Quusin
Dhexroor DN350-1400 mm
Awood 900-12500 m3 / saac
Madaxa ilaa 20m
Heerkulka dareeraha ah ilaa 50 ºC
Ku rakibida dhuumaha nuugista iyo dheecaanka
1.Suction tuubo: sida ku cad sawirka guud ee buug-yaraha. Moolka ugu hooseeya ee bamka ka hooseeya biyaha waa inuu ka weynaadaa xogta ku jirta sawirka.
2.Discharge: waalka daboolka iyo habab kale.
Rakibaadda: taxanaha MVS waxay ku habboon yihiin suxulka rakibaadda cantilever, rakibaadda cantilever si fiican iyo rakibaadda si fiican u cantilever
Mashiinka Submersible (MVS taxanaha) Fasalka awoodda: waxqabadka korantada ayaa la kulmaya GB755
Fasalka ilaalinta: IP68
Nidaamka qaboojinta: ICWO8A41
Nooca rakibidda aasaasiga ah: IM3013
Danab: ilaa 355kw, 380V 600V 355KW, 380V 600V, 6kv, 10kv
Fasalka daboolka: F
Awood lagu qiimeeyay: 50Hz
Dhererka xarigga: 10m
Noocani wuxuu leeyahay laba ama saddex shaabadood oo farsamo ah. Shaabadda koowaad, ee biyaha la xiriirta, waxaa badanaa laga sameeyaa kaarboon silicon iyo kaarboon silicon. Midka labaad iyo kan saddexaad waxaa badanaa laga sameeyaa garaafka iyo kaarboon silikoon.
Taxanaha MVS AVS wuxuu leeyahay dareeraha ilaalinta baxsiga. Marka guriga saliidda ee matoorka ama sanduuqa siliggu uu daadanayo, dareeraha ayaa bixin doona digniin ama joojinaya shaqada isla markaana ilaalin doona calaamadaha.
Kuleylka kuleylka ah
Wareegista MVS taxane matoorka ayaa leh ilaaliyaha kuleylka. Markay kululaato, digniin ayaa la bixin doonaa ama mootadu way joogsan doontaa shaqada.
Markaad dhinaca kore ka eegto, qalabka wax lagu duubo wuxuu u wareegayaa saacad ahaan.
MVS taxanaha mashiinka qulqulka qulqulka qulqulka 'AVS taxanaha qulqulka qulqulka dalabka: saadka biyaha ee magaalooyinka, shaqooyinka leexinta, nidaamka bullaacadaha, mashruuca qashinka bullaacadaha.
Xal ujeedo badan
• Bamgareynta bamka caadiga ah
• Maaddooyin adag oo adag oo adag
• Si fiican u tilmaamidda - awoodda bamka faakiyuumka oo sarreeya
• Codsiyada socda ee qallalan
• kalsoonida 24 saac
• Loogu talagalay jawiga jawiga sare
Pfarshaxanka Mashruuca Muunad
ANS (V) Taxanaha Laba-nuugga Oo Loo Kala Saarayo Xargaha ...
API610 ANSI Nidaamka Kiimikada ee Petrochem ...
Taxanaha TWP Mobile Laba treys Diesel Engine Drive ...
GDL non-Self Nuugista Tooska ah ee Multi-Stage Centr ...
MS Cadaadiska Sare multistage nadiif ah wa ...
LDP Taxanaha Hal-Marxaladaha Dhammaadka Neefta Horizontal ...